के तपाइको यस्तो बानि छ ? छिट्टै बुढ्यौलीतिर धकेलिनु होला है ! - ramechhapkhabar.com
प्रत्येक मानिसका शरीरलाई हानी पुर्‍याउने केही न केही खराब बानीहरू हुन्छन् । त्यस्ता केही खराब बानीले हाम्रो स्वास्थ्यसँगै ‘एजिङ प्रोसेस’लाई पनि छिटो बनाइदिन्छन् । यदि हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा ध्यान पुर्‍याउने हो भने एजिङ प्रोसेसलाई सुस्त बनाउन छिटै हुने बुढापाबाट जोगिन सकिन्छ ।
धुम्रपान/मद्यपान: तनाव र एन्जाइटीबाट बच्न धेरैले अल्कोहल, तम्बाकु वा ड्रग्सको सहारा लिएका हुन्छन् । यसको प्रयोग युवा पुस्तामा झनै बढ्दो छ । यसको धेरै प्रयोगबाट मानिसको मृत्यु पनि हुनसक्छ । तर, त्यसअघि यसको लगातार प्रयोगबाट मानिस छिटै बुढो हुन थाल्छ । यसले दिमागी र शारिरीक समस्या बढाउँदै मानिसको एजिङ प्रोसेसलाई अझै तीव्र बनाउँछ ।